Fipetrahana amam-bolana - Fiangonan'Andriamanitra manerana izao tontolo izao Soisa
haino aman-jery > Mifantoha amin'i Jesosy > Mifantoha amin'i Jesosy 2019-03 > volana-fipetrahana
Amin'ny 21. Tamin'ny Jolay 1969, nandao ny fiara fototra i Neil Armstrong, mpanamory sambon-danitra, ary niditra ny volana. Izao no teniny: “Diingana kely ho an’ny olombelona izany, dingana lehibe ho an’ny olombelona”. Fotoana manan-tantara lehibe ho an'ny olombelona rehetra izany - sambany teo amin'ny volana ny olona.
Tsy te ho variana amin'ny zava-bita ara-tsiansa mahavariana ao amin'ny NASA aho, nefa mbola manontany tena ihany aho hoe: inona no nataon'ireo dingana ara-tantara tamin'ny volana ireo? Mbola mitohy ny tenin'i Armstrong ankehitriny - nefa ahoana no namahan'ny olany ny volana nahavaha ny olantsika? Mbola manana ady, fandatsahan-dra, hanoanana ary aretina isika, mitombo ny loza vokatry ny tontolo iainana noho ny fiakaran'ny hafanana.
Amin'ny maha-Kristianina ahy, dia afaka milaza amim-pahatokiana tanteraka aho fa ny dingana manan-tantara indrindra hatramin'izay, izay tena naneho ny "dingana goavam-be ho an'ny zanak'olombelona", dia ny dingana nataon'i Jesosy tao amin'ny fasany 2000 taona lasa izay. Nilaza i Paoly fa ilaina ireo dingana ireo eo amin’ny fiainana vaovaon’i Jesosy: “Raha tsy natsangana Kristy, dia fitaka ny finoanareo; mbola ao aminareo ihany ny heloka izay nataonareo tamin’ny fahotanareo » (1. Korintiana 15,17).
Tsy toy ilay hetsika 50 taona lasa izay, ny media manerantany dia tsy nisy mpijery, tsy nisy ny fandrakofana manerantany, tsy tamin'ny fahitalavitra na noraisina an-tsoratra izany. Tsy mila olona hanazava izy. Natsangana tamin'ny fotoana mangina i Jesoa Kristy rehefa natory izao tontolo izao.
Ho an’ny olombelona rehetra tokoa ny dian’i Jesosy, ho an’ny olombelona rehetra. Nanambara ny fandresen’ny fahafatesana ny fitsanganany tamin’ny maty. Tsy misy dingana lehibe kokoa ho an'ny olombelona noho ny fandresena ny fahafatesana. Niantoka ny famelan-keloka sy ny fiainana mandrakizay ny zanany. Ireo dingana ireo amin'ny maha-fitsanganana an'Andriamanitra azy no tena nanapa-kevitra indrindra teo amin'ny tantaran'ny olombelona rehetra. Fiantohana goavana avy amin’ny fahotana sy ny fahafatesana ho amin’ny fiainana mandrakizay. “Fantatsika fa rehefa nitsangana tamin’ny maty Kristy, dia tsy ho faty intsony Izy; tsy manan-kery aminy intsony ny fahafatesana » (Romana 6,9 Fandikan-teny Genève Vaovao).
Io lehilahy io dia afaka mandeha amin'ny volana dia fahatsiarovana mahafinaritra. Saingy rehefa maty tamin'ny alàlan'i Jesosy teo ambonin'ny hazo fijaliana Andriamanitra noho ny fahotantsika sy ny mpanota, dia nitsangana indray izy ary nihazakazaka tao amin'ny saha, ny dingana lehibe indrindra ho an'ny olombelona amin'ny ankapobeny.